PSJTV | नेपालीबाट पनि ‘सेक्सटोर्सन’
नेपालीबाट पनि ‘सेक्सटोर्सन’
शनिबार, २९ बैशाख २०७५ पिएसजे न्युज
काठमाडौं, २९ वैशाख ।
नेपाली सर्ट मुभिकी नायिका सरिना शर्मा (नाम परिवर्तन) प्रेमीसँग खुसी थिइन् । उनीहरु काठमाडौंमै लिभिङ टुगेदरमा थिए । त्यसो हुँदा दुईबीच सबै खालका सम्बन्ध भइसकेका थिए । यही क्रममा दुईबीच राजीखुसीसँगै शारीरिक सम्बन्धको भिडियो खिचियो । भिडियो दुवैले सेयर गरे। दुईबीच विवाहको कुरा चल्दै थियो ।
अचानक खटपट भयो । बोलचाल बन्द भयो । सम्बन्धमा खटपट आयो । यही क्रममा दुईबीच शारीरिक सम्बन्ध भएको भिडियो यु–टुयुवमा पोष्ट भयो । भिडियो रातारात भाइरल बन्यो ।
सरिना तनावमा परिन् । कानुनी उपचारका लागि उनी महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा पुगिन । अनुसन्धानपछि थाहा भयो, उनको भिडियो उनकै फेक आइडी बनाएर अपलोड गरिएको नयाँपत्रिकामा खबर छ ।
प्रहरीको अनुरोधपछि उनको भिडियो भने हटासकिएको छ । तर, घटनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन् । अनुसन्धानकै क्रममा भएकोले घटना सार्वजनिक नगरिएको महाशाखाका एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले बताए । उनले भने ‘अपलोड भएको भिडियो हटाईएको छ । घटना शंकास्पद छ । अनुसन्धान भइरहेको छ । यस सम्बन्धमा थप नभनौं।’
मंगल ग्रहमा किन पुग्न सकेनन् मानिस? यस्ता छन् कारण
सर्पले विद्यार्थी डस्दा शिक्षकको जागिर चट
टाउको दुखाइमा ‘पेनकिलर’ भन्दा राम्रो ‘बियर’
चिनियाँहरू नुहाउने बेलामा पनि मोबाइल चलाउँछन्
‘सेक्स फेस्टिबल’ मा महिलालाई हृदयघात
जुम्ल्याहा बच्चा तर फरक-फरक पिता, पर्‍याे पति-पत्नीबीच झगडा
कोरोना प्रभाव : अमेरिकामा अनिश्चितकालीन संकटकाल घोषणा
अब जन्मँदै छोरीलाई तीन लाख!
खुसीले बढाउँछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता
20th Feb 2020 पिएसजे न्युज
मानव बेचविखन तथा अनुसन्धान ब्युरो बबरमहल पुग्दा ८/१० जना युवा हातमा कागजात लिएर बसिरहेका थिए। पीडितहरु तस्करीमा संलग्नको हुलिया बताउँदै थिए। हातमा सरकारी कागजात, तस्करहरुलाई बुझाएको बैँक भौचर, मोबाइलमा तस्करको फोटोसहित उनीहरुले ...
उखुको भुक्तानी नदिई किसानलाई सताइरहेका चिनी उद्योगले उखु किन्न सरकारबाट चार वर्षअघि लिएको ४५ करोड ८ लाख रुपैयाँ पनि गायब पारिदिएका छन्। आफूहरूसँग नगद प्रवाह नभएको भन्दै चिनी उद्योगले ०७२ मा ...
2nd Mar 2020 पिएसजे न्युज
चीन र दक्षिण कोरियाबाट फर्केका चार नेपाली कोरोना भाइरसको सं‌क्रमण आशंकामा अस्पताल भर्ना भएका छन्। एक जना चीन र तीन जना दक्षिण कोरियाबाट फर्केका व्यक्ति भएको शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा ...